FAMPAHALALANA SY SARY AVY AMIN'NY PATTERDALE TERRIER DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary avy amin'ny Patterdale Terrier Dog
Beau the Patterdale Terrier amin'ny taona 1
Lisitry ny alika mitambatra Patterdale Terrier Mix
Ny lohan'ny Patterdale dia matanjaka sy mahery, mifandanja amin'ny haben'ny alika, ary ny wedge na trapezoidal miendrika raha jerena avy eo aloha. Mitovy ny halavan'ny karandohany sy ny saosika, na somary fohy kokoa noho ny karandohany ny vava. Ny jowl sy ny moose dia manana akora tsara. Tokony ho mafy ny vavam-borona, tsy hiseho kely na osa mihitsy. Ny nify matanjaka sy fotsy dia mihaona amin'ny hety na manaikitra. Ny nify tapaka na incisors very noho ny fiasana dia tsy azo saziana. Ny maso dia apetraka tsara eo amin'ny karan-doha ary somary mivelatra. Amin'ny maha-teriteran'ny tany azy dia zava-dehibe ny tsy hivoahan'ny maso na hibontsina. Ny lokon'ny maso dia tokony hifanaraka amin'ny lokon'ny palitao, fa tsy manga mihitsy. Ny sofina dia telozoro ny endrika, ary kely sy antonony ny habeny, aforitra tsara eo ambonin'ny karandohany. Ny toro-hevitra dia manondro ny zoro ivelany amin'ny maso. Mainty ny orona afa-tsy ireo alika miloko aty, izay manana orona mena. Madio ny hatoka, hozatra ary lava ny halavany, mihalehibe miandalana avy eo am-bohoka ary mifangaro tsara mankamin'ny soroka. Lava ny soroka, misolampy ary milamina tsara. Mahery sy mahitsy ireo forelegs, misy taolana tsara. Ny kiho napetraka eo akaikin'ny vatana fa mihetsika malalaka. Pasterns mahery sy malefaka. Ny vatana dia tokony ho efa-joro na somary lava kokoa noho ny hahavony, refesina hatramin'ny tendron'ny soroka mankany amin'ny tendrony, ary hatramin'ny malazo ka hatrany amin'ny tany. Ny lamosina dia lava sy halavany antonony, mifangaro amin'ny valahana hozatra, somary misy arched izay somary averina kely ihany. Ny tratra dia tokony ho mafy orina nefa malefaka, lalina amin'ny haavon'ny kiho fa antonony ny sakany ary ny endrika boribory lavalava. Ny spanning dia ampahany manan-danja amin'ny fizotran'ny fitsarana an'i Patterdale Terriers. Izy ireo dia tsy maintsy asiana fitsapana ny habeny, ny famatrarana ary ny fahalalahana. Ny Patterdale dia tokony ho afaka zahana mivantana ao ambadiky ny soroka amin'ny tanan'ny olona salantsalany. Rehefa mamelatra dia atsangano amin'ny tany na latabatra ny tongotra eo anoloana ary apetaho moramora ny vodin-tratra mba hahazoana antoka fa hangeja ny tratra. Mahery sy hozatra ny foibe. Ny taolana, ny tebiteby ary ny hozatra dia mitovy amin'ny an'ny foibe. Miondrika tsara ny stifles ary aondrana tsara ny hock. Rehefa mijanona ny alika, ny pastern fohy fohy sy mahery dia mifototra amin'ny tany, ary raha jerena avy any aoriana dia mifanitsy. Atao avo ny rambony fa tsy entin'ny lamosina. Raha tafapetraka, ny ampahefatry ny iray ampahatelony ihany no tokony hesorina, satria indraindray ny rambony no hany fitaovana enti-misintona ny alika hiala ao anaty lavaka. Ny rambo dia tokony ho mafy fa tsy matevina loatra. Tsy misy ny safidy eo amin'ny dock na voajanahary. Ny palitao dia mety malama na vaky. Amin'ny karazany roa amin'ny palitao dia tokony hisy palitao fohy sy matevina. Kely dia kely ny fikolokoloana hitazomana ny akanjo palitao. Malama: volo maditra, matevina ary mafy, miverina miverina amin'ny toerany rehefa nakarina. Tsy misy onja eo. Vaky: palitao mpanelanelana, manana volo mpiambina lava kokoa noho ny palitao malama. Ny volo mpiambina dia masiaka sy marefo ary mety mikotrana. Ny alika vaky volo dia mety misy fanaka tarehy na tsy misy volombava, volombava sy volomaso. Ny loko azo ekena dia misy ny mainty, mena, aty, grizzle, mainty sy mainty ary varahina, na mafy na misy marika fotsy eo amin'ny tratra sy ny tongotra.
Ny Patterdale Terrier dia tertera milamina, tsy dia mahafaly toy ny terriers sasany. Ankafiziny ny 'mihodina amin'ny lakan-drano fanafanana' ao an-trano. Na dia ny haben'ny Patterdale Terrier aza dia mety hahafeno azy ho a alika kilalao , ny fahaizany sy ny fahaizany mandehandeha dia mihevitra azy ho toy ny terrain mafy orina ny fahavononany sy ny hamafiny mitaky ny fampidirana azy ao amin'ny vondrona mastiff. Lalao izy ireo ary henjana rehefa mihaza. mpihaza matetika dia alika telo na efatra no hiaraka amin'izy ireo rehefa mivoaka. Ny Patterdale Terrier dia mpiambina tsara. Tsy alika ho an'ny mpankafy tsy terrier na tsy malemy saina. Ny Patterdale Terrier dia mpihaza matanjaka sy mahaleo tena teraka ho an'ny serivisy miasa toy ny mpihaza sy mpihaza namana. ny Taran-dra Bull Terrier ataovy masiaka loatra ny miasa toy ny mpihaza miaraka amina alikaola. Izy ireo dia mafy sy maharitra. maro Foxhound Tsy misaotra anao ny tompony noho ny fanandramanao nanidy ny amboahaolo tamina Patterdale voakaikitra mafy, satria ny alika dia mety hihazona mafy ary handeha, mety hamono ilay amboahaolo fa tsy hamela azy hivezivezy, ka hanimba ny hazalambo amin'ny . Mpihady digady tena tsara izy, vonona ny hihaona sy hanafika ny biby mampinono rehetra izay efa nidina tany. Ny fianjeran'ny firenena avaratra, miaraka amin'ny fiarovana omen'ny amboahaolo any amin'ny borrans, tendron'ny vatolampy, toeram-pitrandrahana ary scree, dia namorona ny ilana tertera tery mafy hiady amin'ny tany sy tsy misy tahotra hidina amin'ny tany. Nameno i Patterdale, ary mbola mameno izany filàna izany. Ny fahalianan'ny mpiompy ao an-toerana no miantoka ny fahavelomany. Ny karazany dia tsy mora ny manofana. Ny Patterdale dia tsy tokony hatokisana biby fiompy tsy kaninina . Hamarino tsara fa ity karazana ity mafy orina, matoky tena , mifanaraka mpitarika fonosana misoroka olan'ny fitondran-tena avy amin'ny fampandrosoana. Tsy atolotra ho an'ny tompona biby fiompy antonony. Mila manana ny sainy ho enta-mavesatra miaraka amina be dia be izy ireo fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana . Raha tsapan'izy ireo fa tsy dia matanjaka saina toa azy ireo ianao dia hino fa alpha izy ireo ary hiatrika olana ny olombelona. Aza avela hivoatra ity alika ity Syndrome kely alika .
Haavony: tokony ho 12 santimetatra (30 cm)
Lanja: 11 - 13 pounds (5 - 6 kg)
Ny Patterdale Terrier dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Ity karazana ity dia somary tsy miasa ao anaty trano raha toa ka manana fanatanjahan-tena ampy mandritra ny andro. Ny Patterdale dia azo alefa miaraka amin'ny terriers roa na telo hafa, raha mbola manana asa sy fihazana ampy hitazomana azy hampiasaina sy afa-po izy. Raha mankaleo sy tsy misy fanatanjahan-tena dia mety mifidy ady amin'ny vady aman-janany izy.
Alika miasa ity mpihaza lalao kely ity ary mila fanatanjahan-tena be. Ny alikanao dia mila raisina isan'andro, haingana, lava mandeha na mihazakazaka . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ny fampihetseham-batana sy tahiry haza matevina no fomba fanolorana fahafaham-po amin'ny faniriany mihaza. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano fa misy angovo ivelan'ny trano. Tian'izy ireo ny mihazakazaka ary hankafy ny mandeha an-tongotra miaraka aminao.
11-13 taona eo ho eo.
Ilaina ny fikarakarana kely.
Nisy fotoana samy hafa karazana karazam-borona isan-karazany tao amin'ny tanàna mitokana tsirairay any avaratry Angletera. Ny fihenan-tsofina amin'ny fenitry ny Kennel Club dia nampihena an'io karazana karazany io, saingy ny firoboroboan'ny faritra lavitra tsy fantatra dia nitombo hatrany. Ny Patterdale dia iray amin'ireo karazany ireo. Saika tsy fantatra ivelan'ny Great Britain, ity karazany ity dia hita matetika ao amin'ny faritanin'i Great Britain's Lake sy any Yorkshire. Ny anarana Patterdale dia nofidina taorian'ny tanàna tao Cumbria, izay mahazatra ny alika. Natao toy ny voalavo, amboahaolo SY mpihaza bitro , ny Patterdale Terrier dia tsy namboarina hanana endrika ivelany, fa noho ny fahaizany miasa. Nilaza ny mpiompy iray fa tsy dia misy dikany loatra ny fampisehoana fampifanarahana, raha izany no izy, ny alika dia afaka miasa tsara kokoa miaraka amin'ny loha roa, 'dia hifidy avy hatrany izany toetra izany isika.' Ny Patterdale dia nentina voalohany tany Etazonia tamin'ny 1978. Any Etazonia ny alika dia mihaza izay misy volony avy amin'ny woodchuck (groundhog), amboahaolo, Raccoon ary badger mihitsy aza. Amerikana Patterdale iray antsoina hoe 'Rocky', lanja mavesatra 13 pounds, vao tsy ela akory izay, nanintona badger 16 kilao!
Tanzi the Patterdale Terrier toy ny alika kely amin'ny 5 volana
Bippie the Patterdale Terrier
Patoy ilay sôkôla Patterdale Terrier alika amin'ny 11 herinandro
afangaro mpiandry ondry aostralianina
Sary natolotry ny MQH Patterdale Terrier Kennel
Sarin'alika pupp Patterdale nahazo alalana avy amin'ny MQH Patterdale Terrier Kennel
Hijery ohatra misimisy momba ny Patterdale Terrier
Patterdale Terrier Sary 1
Patterdale Terrier Sary 2
Patterdale Terrier Sary 3
cavalier king charles spaniel afangaro amin'ny poodle
alika an-tendrombohitra swiss lehibe mifangaro alika kely
anglisy bulldog amerikana bulldog mix